Isiokwu nke Ọdịnaya Oge Ahịa | Martech Zone
Isiokwu Nke Oge Ahịa nke Ahịa
Sunday, June 21, 2015 Tuesday, June 23, 2015 Douglas Karr
Naanị afọ iri gara aga, azụmaahịa ọdịnaya yiri ka ọ dị mfe karịa, ọ bụghị ya? Ederede nwere onyonyo mere ihe ịtụnanya ma enwere ike iji ya mee ihe na akwụkwọ ozi ezigara na webụsaịtị ụlọ ọrụ. Ngwa-ngwa-ngwa na ọ na-aghọ nnọọ a mgbagwoju ohere. Ihe ngosi a nke oghere ahia di ka tebụl Oge, dị oke mma. Onye mepụtara ya bụ Ọdọ Mmiri Chris, Onye isi nzụlite ngwaahịa na Econsultancy.
Pịa na previu na saịtị anyị iji nweta ya oyiyi zuru, ọ bara uru ibipụta ma tinye tebụl gị. Ma ọ bụ ikekwe na bọọdụ nke ị nwere ike ịtụgharị dart na-elekwasị anya ụbọchị ahụ na usoro, usoro, ụdị, ikpo okwu, ụkpụrụ, ebumnuche, na-ebute ma ọ bụ naanị laghachi ma bulie ọdịnaya dị ugbu a Dịka ọmụmaatụ, n'izu gara aga, anyị agafeela ihe karịrị 100 ederede na Martech iji melite njikọ, vidiyo, ọdịnaya, ma ọ bụ onyonyo. Anyị ehichapụkwala akwụkwọ edemede iri na abụọ na teknụzụ ma ọ bụ ihe ndị mere n'oge gara aga nke na-enyekwaghị uru ọ bụla na saịtị ahụ.
Otu esi eji okpokoro oge nke ahia ahia
Na ya, Chris na-agbaso usoro ntuziaka 7 ya iji nwee ọganiihu nke ọdịnaya, na-amalite site na atụmatụ ahụ wee kwụsị na nyocha abụọ na kachasị ọrụ gị.
Strategy - Igodo bụ isi maka ihe ịga nke ọma. Ime atụmatụ na ilekwasị anya dị ezigbo mkpa. Ichoro uzo doro anya, nke edere na ebumnuche ahia gi ogologo oge. Nkwado okwu bara uru nwekwara nnukwu uru omume kacha mma na usoro ọdịnaya.
format - Ọdịnaya na-abịa n’ụdị na nha dị iche iche. Rịba ama na ị nwere ike iji ọtụtụ ụdị maka otu ọdịnaya.
Contentdị Ọdịnaya - Ndị a dabere na ụdị ọdịnaya dị iche iche nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma maka Econsultancy.
Platform - Ndị a bụ nyiwe nkesa ọdịnaya. Nwere ike ịnwe ụfọdụ n'ime ndị a (ịmaatụ # 59, weebụsaịtị gị). Ndị ọzọ bụ saịtị mmekọrịta (nke gị, netwọkụ gị, ndị ọzọ). Ihe ndị a niile na-enyere aka ịgbasa gbasara ọdịnaya gị.
Mgbochi - Ihe ndị a na-enyere gị aka ịlele arụmọrụ nke ọdịnaya gị. Maka ebumnuche nke mkpụmkpụ, a na-achịkọta usoro metrik (eg nnweta metrics).
Goals - Ọdịnaya niile kwesịrị ịkwado ebumnuche azụmaahịa gị bụ isi, ma ọ bụ nke ahụ na -emepụta ọtụtụ okporo ụzọ, ma ọ bụ na-ere karịa, ma ọ bụ na-eme ka mmata mara. Laser-eduzi ọdịnaya ga-nne Mmetụta ole na ole nke igbe ndị a.
Ikekọrịta Ihe - Nke a bụ n'ụzọ dị ukwuu sitere n'ike mmụọ nsọ Ihe mgbasa ozi na-adịghị agbanwe agbanwe maka ịkekọrịta ọdịnaya. Chee echiche banyere ndị na-anya mmụọ nke na-eso ịkekọrịta, ma gbaa mbọ hụ na ọdịnaya ị mepụtara na-eme ka ndị mmadụ nwee mmetụta.
ed - A ga-edozi ọdịnaya niile nke ọma maka ọchụchọ, maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, yana ịkwado ebumnuche azụmahịa gị.
Tags: contentdị ọdịnayacontent Marketingndenye ahia ahia ọdịnayaebumnuche ahia ọdịnayametrik ọdịnayanyiwe ọdịnayaọdịnaya nkekọrịta na-akpaliteatụmatụ ọdịnayaụdị ọdịnayaoge table nke ọcha
Ahịa na Marketingzụ: Egwuregwu mbụ nke ocheeze
Nnukwu sdị nwere Nsogbu, Ube Nwere Ihe Ngwọta
Jun 22, 2015 na 8:04 AM
Ihe onyonyo a abụghị nnukwu mkpebi enough mgbe anyị na-anwa ịbipụta ya, enweghị iwu. Ọmarịcha echiche!
Jun 22, 2015 na 10: 44 PM
Nke a bụ njikọ njikọta iji budata onyonyo mkpebi dị elu site na saịtị ha - nwee olile anya na ọ na-enyere aka! njikọ
Aha ya bụ Kathy Hauer
Jun 22, 2015 na 8:34 AM
Doug - ihe bu nnukwu blog na izu oke! Hụ echiche a n'anya !!! Di injinia m, onye na-eleda ahịa anya, chere na ọ na-atọ ụtọ. Ghaghi ikwuputa ọdịnaya di egwu na uzo ohuru. Daalụ! Kathy
Jun 22, 2015 na 10: 43 PM
Daalụ nke ukwuu, Kathy! Enwere m ekele maka iche n'ụzọ pụrụ iche a na-ahụ usoro a! Econsultancy kwesiri otuto niile.
Ọdọ Mmiri Chris
Jun 23, 2015 na 4:27 AM
Hey Doug - chọrọ ịkele ekele maka oge Isiokwu Oge ịhụnanya! Mmeghachi omume na ya ka na-eweda m ala. Enweghi ntaramahụhụ ..; )
Jun 23, 2015 na 12: 39 PM
Chris enweghị ike ịkele gị. Enweghị m ike iche n’ọrụ nke batara na nke a!
Mar 11, 2016 na 4: 14 PM
N'ezie jụụ image! Ezigbo ihe enyemaka.
Aug 30, 2016 na 8: 19 AM
Nke a bụ insaaane! Uber geeky, Douglas! Enwere m mmasị na tebụl oge na-atụghị anya ịchọta ihe dịka nke a! Daalụ! 🙂
Aug 30, 2016 na 5:16 PM
Echere m na ọ dịkwa mma nke ọma! Kudos nye ndị na-emepụta ihe.